छोरी मनपर्‍यो भने आमा कडा भएर के हुन्छ र! - Pahilo Drishti
२०७८ भाद्र ८, मंगलवार ०९:३९ गते
‘म डाक्टर जस्तो मान्छे, जस्तो खोज्यो त्यस्तै केटी पाउँछु’ भन्ने उनको भ्रम थियो। घरीघरी भाइले जिस्क्याउँदै भन्थे – राम्रो केटी पाउन त बेलैमा लभ पार्नुपर्छ नत्र त कहाँ कुरेर बस्छन् र सर्वगुणीहरूले हाम्लाई? उमेर छउञ्जेल किताबकै किरो बन्दा ठिक्क भयो हजुरलाई।
यतिकैमा विशालकी आमा चिया लिएर बैठकमा प्रवेश गर्छिन्। विशाल पछिपछि आएर सबैलाई नमस्कार गर्छन् र एक छेउमा बस्छन्। कल्पना भन्छिन् – बाबुलाई चिया बनाउन आउँछ कि आउँदैन? आज बाबुकै हातबाट बनेको चिया खानुपर्ने थियो, खाना बनाउने त गर्नुहुन्छ होला नि! अनि नुहाएर आफ्नो भित्री लुगा बाथरुममै छोड्ने बानी त छैन नि?
छोरीले पनि आमाको कुरामा सहमति जनाउँदै एक महिनासम्म पर्खिने बताइन्। विशालका परिवार आक्रोशमा आए। अरु केटी खोज्नतर्फ लागे। फेरि एक जना केटीको कुरा आयो। विशालले उनको प्रोफाइल हेर्छन्। नाम – समिरा, काम -फेसन डिजाइनर। रुची- मान्छे जलाउने। विशाल झसंग हुन्छन्। तर केटी भने राम्री लाग्छ।
केटीहरू निकै सचेत भएछन् आजभोलि। ‘केटा हो हाम्रा दिन गए अब…,’ उनी एक्कासी चिच्याउँछन्। टाउको दुखेर आउँछ।
‘मामु चिया’ भनेर चिच्याउन मात्र के खोजेका हुन्छन् कल्पना आन्टीले दिएको च्यालेन्ज सम्झना आयो। अनि आफैं उठेर भान्सातर्फ जान्छन्। मोबाइलमा गुगल सर्च थिचेर टाइप गर्छन् – हाउ टु मेक लेमन टी?